Monday May 09, 2022 - 20:23:23
Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa sheegaya in caawa qarax xoogan uu ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho, kaas oo lala eegtay taliyaha ciidamada Police-ka gobolka Banaadir, Farxaan Qaroole.
Qaraxan oo ka dhacay deegaanka Ceelasha Biyaha ayaa lala eegtay mid ka mid ah kolonyadii galbineysay Farxaan Qaroole, waxaana la xaqiijiyey in gabi ahaanba uu burburay gaariga uu qaraxu haleelay.
Sarkaal amni oo u hadlay Shabaabul Mujaahidiin ayaa sheegtay in howlgal qorsheysan ay ku beegsadeen nin Murtad ah oo lagu magacaabo Farxaan Qaroole, kaas oo ku magacaaban taliyaha Police-ka gobolka Banaadir.
ilo wareedyo ayaa SomaliMeMo u xaqiijiyey in qaraxa ay haleelay gaari ay saarnaayeen ilaalada gaarka ah ee Farxaan Qaroole, islamarkaana uu halkaas ka dhashay khasaare xoogan.
Muqdisho iyo duleedyadeeda ayaa marti geliya qaraxyo joogta ah oo lagu beegsado saraakiisha DFS iyo ciidamada Shisheeye ee duullaanka ku jooga wadanka.
Iiraan oo Casishay Taliyihii Sirdoonka ciidanka ilaalada Kacaanka.